Naya Post Nepal | महानायक राजेश हमा,लको काठमा,डौंको मेयर हुने इ’च्छा ! भिडियो सहित
महानायक राजेश हमा,लको काठमा,डौंको मेयर हुने इ’च्छा ! भिडियो सहित
महानायक राजेश हमालले काठमाडौंको मेयर हुने इच्छा जाहेर गरे का छन् । प्रसारणको तयारीमा रहेको ‘राजेश हमालसँग एकदिन’ कार्यक्र ममा उनले यो इच्छा राखेका हुन् ।
हमालले बुधबार आफ्नै नामको युट्युब च्यानलबाट हमालसँग एक दि न नामक कार्यक्रमको ट्रेलर हालेका छन् । उक्त ट्रेलरमा हमालले मेयर हुने इच्छा जा’हेर गरेको देख्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा हमालले नेताहरुले काठमाडौं व्यवस्थित गर्न नस केको प्रति प्रश्न उठाउँदै मेयर हुने इच्छा जाहेर गरेका हुन् ।
‘शहरलाई ब्युटिफाइ गर्ने कुरोमा कसैको ध्यान गएन । भाषणमा भने भनिरहेका हुन्छन्’ हमा,लले अ,गाडि भनेका छन् ‘प्राक्टिक,ल्ली गर्ने सोच नपुगेर होकि ढंगै नपुगेर होकि, एकपटक काठमाडाैं शहरको मे यर बन्नुपर्छ कि क्या हो म ?
ट्रेलरमा गाडीमा बसेर काठमाडौं घुमिरहेका हमालले चालक सिटमा रहे का व्यक्तिसँग कुरा गर्दै शहरको अस्तब्यस्तताप्रति असन्तुष्टि समे त ज नाएका छन् । ट्रेलरमा उनले आफ्ना विभिन्न फिटनेस क्रियाक लाप स मेत देखाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हमालले घुमाउरो शैलीमा राखे को यो इच्छालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ ।
यो पनि ,,सङ्खुवासभा को मादी बाट झापा को दमक जाँदै गरे को यात्रु बाहक बस दु”र्घटना हुँदा १४ जना’को मृ”त्यु भए को छ । आ ज (बिहीबार) बिहान मादी नगर पालिका–६ को पुलुड्ड
स्थित सात घुम्ती मा दु’र्घटना हुँदा १४ जना’को मृ”त्यु भए को हो । ना ४ ख ७३५ नम्बर को बस सडक बाट करिब ३०० मिटर तल ख’से को थियो ।
अहिले सम्म दु र्घटना मा मृ’त्यु भए’का १४ जना को शव निकालिए को प्रहरी नायब उप’रीक्षक ला’लध्वज सुवेदी’ले जान’कारी दिए । उनका अनुसार मृतक’को पहिचान भने भए को छैन ।
दु’र्घटना मा पाँच जना को जीवितै उ”द्धार गरिए को छ । दु’र्घट”ना मा कति जना को ज्या”न गयो भन्ने विवरण स’ङ्क’लन भइरहे को उन ले जान’कारी दिए ।
घा’इते हरु को चै’न’पुर अस्पताल’मा उपचार भइरहे को छ । क्ष’तिको यकिन वि’वरण आइनसकेको जिल्ला प्रहरी
कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवेदीले ब’ताए । स्थानीयका अ’नुसार बसमा करिब १९ देखि २१ जना यात्रु रहेको जनाए ।
२०७८ फाल्गुन २६, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 256 Views